Fitaovana metaly Sheet mora manosika orinasa sy mpamatsy | Ouzhan
Ny fitaovana ankapobeny amin'ny fanodinana vy dia: vy vy, vy tsy misy fangarony, tinplate, vy lohataona, alimo varahina sy varahina, firaka manezioma, lovia mangatsiaka vita amin'ny alimo aluminium, lovia mafana mihodina, lovia vy, lovia electrolytic, lovia aluminium, vy tsy misy fangarony, lovia varahina.
Fanitsiana metaly fanoratana metaly
Amin'ny ankapobeny, ny fitaovana fototra dia misy ny Machine Shear, Machine / Laser Punching / Laser, Plasma, Machine Cutting Waterjet, Machine Bending, ary fitaovana isan-karazany toy ny: Machine Uncoiling, machine leveling, machine deburring, machine welding welding, sns. Ouzhan dia manana ireto feno ireto fitaovana sy andalana famokarana feno. Omeo anao serivisy namboarina ho matihanina.
Tombontsoa amin'ny faritra nohomboana vy any Ouzhan
- Ny fomba fanisiana tombo-kase dia afaka mahazo sangan'asa misy endrika sarotra sy sarotra amboarina amin'ny alàlan'ny fizotrany hafa, toy ny ampahany amin'ny akorandriaka. Ny fahamendrehan'ny ampahany amin'ny stamping mangatsiaka dia azo antoka amin'ny bobongolo, noho izany dia tsara ny fitoniana dimensional ary tsara ny fifanakalozana.
- Taham-pahaizan'ny fampiasana fitaovana avo lenta, lanja maivana, henjana tsara ary tanjaka ambony amin'ny workpiece, ary fanjifana angovo ambany amin'ny fizotry ny fitomboana, ka ambany ny fampiasam-bola amin'ny be dia be.
- Fandidiana tsotra, ny hamafin'ny asa ambany, mora ny mahatsapa mekanisation sy mandeha ho azy.
- Ny firafitry ny bobongolo ampiasaina amin'ny fizotry ny fitomboana dia mazàna no sarotra kokoa, ary lava kokoa ny tsingerin'ny fampandrosoana ary avo kokoa ny fampiasam-bola.
Ouzhan OEM namboarina nohitsakitsahinao tamin'ny vy metaly-China Shanghai taratasy fanitsiana vy nohitsakitsahin'ny mpanamboatra faritra
Ouzhan dia mpamokatra manambatra indostria sy varotra, manome serivisy fanodinana milina tokana sy milina fanodinana. Araka ny fitakian'ny mpanjifa, ny metaly fanamafisam-peo vita amin'ny vy metaly avo lenta miaraka amin'ny kalitao azo antoka sy azo ianteherana dia azo zahana. Ireo faritra masinina ireo dia amboarina amin'ny alàlan'ny akora faran'izay tsara kalitao, izay azo avy amin'ireo mpamatsy ampahany marim-pototra fanta-daza eny an-tsena. Ny ekipa teknika matanjaka sy matihanina ary ny rafitra fitantanana mahomby sy miasa dia afaka miantoka ny famokarana tonga lafatra ny vy milina nohitsakitsahin'ny milina. Ho fanampin'izany, ireo vokatra fanoratana vy dia omena fatratra mifanaraka amin'ny fenitra kalitao ary azo ampiasaina amin'ny fampiharana indostrialy isan-karazany. Ary afaka manome serivisy vidin'ny fifaninanana izahay amin'ny stamping vy sy ny vokatra fitomboka amin'ny mpanjifantsika sarobidy.
Fampiharana faritra amin'ny faritra nohomboana vy
1. Sombin-kazo fanamafisam-by metaly: misy ampahany betsaka amin'ny rafitra môtô automatique, faritra mivezivezy mandeha amin'ny fiara, faritra misy latabatra otrikaina, fampitaovana fiara, sns.
2. Sora-by nohitsakitsahin'ny vy tamin'ny vy: ny ankamaroan'ny fitaovana dia ny fampifandraisana, ny mpampitohy, ny faritra borosy, ny terminal elektrika, ny faritra elastika, sns.
3. Fitaovana fanamafisam-peon-by: fanitarana ampahany lehibe amin'ny fitaovana ao an-trano, toy ny faritra misy ny basy elektronika fantsona miloko, sy ny kojakojan-trano kely, kojakoja samihafa ary faritra ilaina.
4. Votoatiny mitarika fizarana miharo IC: ny ankamaroany dia misy rindrambaiko mitarika rindrambaiko sy fefy mitarika fizaran-tany, sns.
5. vy nohitsakitsahiko ny maotera maotera: indrindra dia ahitana andian-dahatsoratra andiana motera andiany, tokana-tokana motera ifotony, iray-dingana alokaloka maotera maotera, andriamby maharitra DC motera fototra, indostrian'ny motera fototra, ary ny stator plastika fototra fiandrasana.
6. vy vy nohitsakitsahiko vy vy elektrika: ny ankamaroany dia ahitana miendrika E transformer cores, EI miendrika transformer cores, I miendrika transformer cores, ary ireo transformer core hafa.
7. Vombam-by fanidiana hafanana vy fanamoriana: ahitana vombony mpanala hafanana indostrialy, vombony mpanala hafanana ao an-trano, ary vombon'ny mpanondrana hafanana amin'ny fiara.
8. Fanitsiana vy amin'ny takelaka sy ny faritra hafa: ao anatin'izany ny ampahany amin'ny fitaovana, ny faritra IT, ny faritra acoustique sy ny fakan-tsary, ny faritra misy ny birao maoderina, ary ny fitaovana isan'andro.
Inona avy no ilana tombo-kase fanoratana vy
1. Fitaovana fanaovana hajia isan'andro sy ao an-tokantrano: kojakoja ilaina isan'andro toy ny vilany sy lapoaly, vilany, vilany, ary kojakojan-tokantrano toy ny milina fanasan-damba, fividianana rivotra, vata fampangatsiahana, ary mpahandro vary;
2. Fitaovana nohitsakitsahin'ny vy indostrialy: akorandriaka chassis fitaovana, vy nohitsakitsahin'ny vy sy ny milina fanaovana injeniera;
3. Fanamafisam-peo amin'ny sehatry ny fantsona: faritra ampiasain'ny fitaovana, mpampifandray sns.
4. Fitaovana fanidiana manokana ho an'ny aérospace, sambo ary sambo an-dranomasina.
Tombony amin'ny serivisy fanoratana vy any Ouzhan
-Ny fahaizan'ny famokarana avo sy ny vidin'ny fifaninanana.
-Ny vokatra vita amin'ny vy nohitsakitsahina rehetra dia iharan'ny fanaraha-maso kalitao hentitra.
- Araka ny sary na ny santionany amin'ny fanamboarana ny fitombenan'ny vy vy.
Previous: Sombin-javatra vy metaly poloney faritra
Manaraka: Fomba fanidiana vy vita amin'ny vy manokana
Varavarana firavaka alimina vita amin'ny alimo sy varavarankely ...
6016 alimina alika fitsaboana hafanana cnc machinin ...